Location: Mbido » Ịdee » Ozi waya » Mgbasa ozi Lemonada nọ na ebumnuche ime ka ndụ ghara ịdị ntakịrị
Lemonada Media, netwọk pọdkastị nke na-enye ụmụ mmadụ na-enweghị nzacha, na-ekwupụta taa na ọ ewepụtala $8 nde na usoro A (agba nke abụọ) nke BDMI na-eduzi, onye enyemaka zuru oke nke mgbasa ozi, ọrụ na ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ Bertelsmann. Agụnyere na agba a bụ Madison Wells, Greycroft, Spring Point Partners LLC, Intuition Capital, na Owl Capital Group. Ndị ọchụnta ego ọhụrụ na ndị dị adị gụnyere Wenda Millard, onye osote onye isi oche nke MediaLink, na Stephanie Hannon, CTO maka mkpọsa onye isi ala Hillary Clinton 2016, yana Blue Collective, onye na-etinye ego mkpụrụ nke Lemonada na onye na-etinye ego n'èzí ruo taa.
N'ịbụ ndị Jessica Cordova Kramer na Stephanie Wittels Wachs tọrọ ntọala, ọrụ Lemonada bụ iwepụta ezigbo akụkọ mmadụ mbụ na-eme ka ahụmịhe mmadụ dị iche iche pụta ìhè ma mee ka anyị niile nwee mmetụta na-adịchaghị naanị anyị. Lemonada na-abanye n'afọ nke atọ nke ọrụ ya na pọdkastị izizi 20 na-eto eto, na-erute ọtụtụ nde ndị na-ege ntị kwa ọnwa. Na 2021, Lemonada ji okpukpu atọ karịa ego ọ na-enweta, gbakwunyere ihe ngosi 10 ọhụrụ, haziri na akara azụmaahịa nke ụlọ ihe nkiri eziokwu ọdịyo (BEING Studios) nke onye ọka iwu TV bụ Kasey Barrett na-eduzi, wee mepụta ihe ngosi izizi dị ka Edere Off na Jay Ellis' Black Bar Mitzvah na Kwere. Ya nwere ụlọ mbipụta Spiegel & Grau, nke ewepụtara n'elu eserese pọdkastị. Netwọk ahụ nwekwara anya na-aga n'ihu na mgbasawanye zuru ụwa ọnụ, mgbe ọ rụchara ihe ngosi 1 na Europe na In Giro con Fra (Italy) na dị ka m na Sinéad (Ireland).
"Onye ọ bụla na-arụ ọrụ na Lemonada na-esi n'àkwà bilie n'ụtụtụ iji nyere aka mee ka ụwa bụrụ ebe ka mma. Ego a ga-eme ka ndị nọọrọ onwe anyị, ndị dị iche iche, ndị inyom na-eduzi, netwọkụ mbụ nke ọdịyo ọ bụghị naanị na-eto slate anyị, kama ịgbasa otu anyị, akara na mmekorita anyị, na obodo ndị okike, "Lemonada CEO Cordova Kramer na-ekwu. "Na mgbakwunye na KPI anyị gburugburu ndị na-ege ntị na ego ha nwetara, otu ihe mgbaru ọsọ n'oge a bụ ilekwasị anya na ụdị dị iche iche, n'ebumnuche nke iru ndị na-ege ntị ọhụrụ na US na ndị ọzọ."
"Nke a bụ oge na-atọ ụtọ maka Lemonada, na-enye ndị ọrụ anyị, ndị ọbịa na ndị mmekọ anyị aka ịnọgide na-emepụta ihe ọhụrụ, rute ndị na-ege ntị na pọdkastị anyị, wee chọta ụzọ anyị ga-esi kpọkọta obodo anyị ọnụ na ihe omume dị ndụ," ka Chief Creative Officer Wittels Wachs kwuru. Pọdkastị ndị ọzọ, ee, mana na-agbasawanye ikike anyị na iweta ikike na ndị ọrụ dị iche iche na netwọkụ, yana mmekọrịta ndị ọzọ na ụdị ndị na-achọkwa ime ka ndụ ghara ịdị anyị nso.
E hibere Lemonada na 2019 mgbe Jess (onye na-emepụta ihe mbụ na Crooked Media) & Steph (onye ode akwụkwọ, onye na-eme ihe nkiri na onye isi ihe nkiri) jikọtara n'ịmụta na ha abụọ tụfuru obere ụmụnne ha hụrụ n'anya na oke ọgwụ opioid. Pọdkastị mbụ nke ụlọ ọrụ ahụ, Ụbọchị Ikpeazụ, na-akọ banyere nsogbu opioid na America site n'ịbanye n'ime ụbọchị ikpeazụ nke ndụ Stefano Cordova Jr., wee malite ilebawanye anya maka ọrịa siri ike. Mgbe ha na-emekọ usoro ahụ, Wittels Wachs na Cordova Kramer hụrụ ohere sara mbara iji mee ka ndụ ghara ịdị ntakịrị, otu pọdkastị n'otu oge, site n'iwulite netwọkụ. Ugbu a-41 onye ọrụ oge niile na-elekwasị anya na NYC, LA, Twin Cities ma na-arụ ọrụ na-agbanwe agbanwe n'ofe mba ahụ.
“BDMI sitere n'ike mmụọ nsọ nke Lemonada na-eto ngwa ngwa, olu pụrụ iche n'ahịa, yana ike imepụta ọdịnaya dị elu ugboro ugboro nke ndị na-ege ntị nwere mmasị na ya. Lemonada na-eme mgbanwe dị mma na ndụ ndị mmadụ ma na-ewulite azụmahịa na-aga nke ọma mgbe ọ na-eme ya," Keith Titan, Onye Mmekọ na BDMI kwuru.
"Madison Wells nwere obi ụtọ itinye ego na ụlọ ọrụ mgbasa ozi tọrọ ntọala nwanyị nke raara onwe ya nye ịkọ akụkọ mgbanwe n'ụzọ na-atọ ụtọ nke na-eme ka ndụ dịkwuo mma n'ụzọ. Anyị na-ekerịta ụkpụrụ bụ isi n'ịkọ akụkọ na nke ahụ bụ ụkọ ụkọ,” Gigi Pritzker na-agbakwụnye, onye nchoputa na onye isi nke Madison Wells. Titan na Pritzker ga-esonye na Board of Directors Lemonada, n'akụkụ Wittels Wachs, Cordova Kramer na Michael Buman.
"Anyị matara Jess na Steph na ndị otu Lemonada, na ihe anyị nwere obi ụtọ bụ Lemonada bụ netwọkụ siri ike nke mbụ nwere ọdịnaya dị ukwuu, yana ikike ya ịbụ ezigbo arịlịka na ndụ nke ọnụ ọgụgụ buru ibu. nke ndị na-ege ntị. Enwere ike ịbụ aha ezinụlọ, "na-ekekọrịta Alan Patricof, onye nchoputa nke ndị mmekọ Greycroft nke tinyegoro ego na Wondery, Veritonic, Sonora, Podsights na ọtụtụ mmalite mmalite-centric ndị ọzọ.
Ọzọ na: Europe
Ọgwụ nyocha ọhụrụ maka ndị ọrịa leukemia dị oke njọ Europe|
Ukraine bụ onye mmeri! Ọ bụ ọchịchị! Europe|
Mmanya mmanu okomoko nke Dọkịta nwanyị mebere
Ahịa ime ụgbọ elu Cabin ga-agbasa na CAGR nke…
Air Astana na-eme emume ncheta afọ 20 nke Almaty mbụ ya…
Nsonaazụ dị mma na ndị ọrịa nwere ihe metụtara afọ Neovascular ...